Movilforum.com ပေါ်တယ်ကွန်ယက်ပိုင် ယနေ့ဘလော့ကုမ္ပဏီပိုင် AB အင်တာနက်ကွန်ရက်များ လိပ်စာနှင့်အတူ 2008 SL, CIF: B85537785
သင်၏အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံများ၊ ပုံစံများနှင့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များ - စပိန်ဒေတာကာကွယ်ရေးအေဂျင်စီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ခွင့်ပြုချက်ကိုရုပ်သိမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ: သငျသညျသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါကယင်းကိုရုပ်သိမ်းခြင်းမပြုမီသဘောတူခွင့်ပြုချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကုသမှု၏တရားဝင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်မဆို၎င်းကိုရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ထိန်းချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ထံမည်သို့တိုင်ကြားရမည်နည်း။ အကယ်၍ AB Internet Networks 2008 SL သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာတစ်ခုရှိသည်ဟုသင်ယူဆပါကသင်၏တောင်းဆိုမှုများကို AB Internet Networks 2008 SL ၏လုံခြုံရေးမန်နေဂျာသို့ (အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သို့မဟုတ်၊ ဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခွင့်အာဏာ သောဖြစ်ခြင်း, ကိုက်ညီ ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်စပိန်အေဂျင်စီ, စပိန်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ညွှန်ပြတ။
ခွဲခြားထားသောဒေတာများ တစ်စစီပိုင်းခြားထားသည့်အချက်အလက်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကာလမပါပဲထားရှိမည်။ E-mail ဖြင့်ထည့်သွင်းရန်စာရင်းပေးသွင်းထားသူများ၏အချက်အလက်များ: အသုံးပြုသူသည်စာရင်းသွင်းထားသည့်အချိန်အထိစာရင်းသွင်းသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုသတင်းလွှာသို့ အသုံးပြုသူသည်စာရင်းသွင်းထားသည့်အချိန်အထိစာရင်းသွင်းသည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်။ AB Internet Networks 2008 SL မှတင်ထားသောအသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ယက်ရှိစာမျက်နှာများနှင့် profiles များသို့ - အသုံးပြုသူသည်သူတို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းသည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့ကိုသူတို့ရုပ်သိမ်းသည်အထိပြုလုပ်သည်။
AB Internet Networks 2008 SL သည်အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည် သူတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေးစားပါ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်တော်ဝင်အမိန့် ၁၇၂၀ / ၂၀၀၇ ပါပြprovisions္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ၎င်းတို့အား၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အညီအသုံးပြုရန်အပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ကုသခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်၎င်းတို့အားထိန်းသိမ်းရန်နှင့်လိုက်နာရမည့်တာ ၀ န်များကိုလိုက်နာရန်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဥပဒေ ၁၅/၁၉၉၉ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုအတည်ပြုပေးသည်။ ပုံစံများမှတဆင့်ပေးအပ်ထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့်၎င်းတို့အားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုပေးရန်တာဝန်ရှိကြောင်းသင်အာမခံပါသည်။ ထိုနည်းတူစွာသင်သည်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်သင်၏တကယ့်အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း၊ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်တိကျမှုရှိကြောင်းအာမခံသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်အမျှမွမ်းမံထားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ပေးထားသောအချက်အလက်များ၏မတိကျမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုနှင့်ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် AB Internet Networks 1720 SL သို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ရှိခြင်းဖြစ်ရမည်။ ကဆိုပါတယ်၏အသုံးပြုမှုကြောင့်တတိယပါတီများ။
AB Internet Networks 2008 SL သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ brute force attack နှင့် code injections တည်ရှိမှုကိုသိရှိနိုင်ရန်လုံလောက်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုချမှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ အင်တာနက်ပေါ်ရှိကွန်ပျူတာစနစ်များ၏လုံခြုံရေးအစီအမံများသည်လုံးဝစိတ်ချရမှုမရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ (သို့) ကွန်ပျူတာစနစ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားဒြပ်စင်များမရှိခြင်းကိုအာမမခံနိုင်ကြောင်းသတိပြုရပါမည်။ အသုံးပြုသူ၏ hardware (သို့) ၎င်းတို့၏အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်များပါ ၀ င်သည်။ ဒီနေသော်လည်းကြိုးစားရန် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအာမခံပါ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏သတင်းပို့ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သောချိုးဖောက်မှုများကိုအစီရင်ခံသည့်တက်ကြွသောလုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်မှုစနစ်ရှိသည်။ အကယ်၍ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုတွေ့ရှိပါက AB Internet Networks 2008 SL ကဝန်ခံမည် အများဆုံး ၇၂ နာရီအတွင်းအသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားပါ.
၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးသည်ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံများ၊ မှတ်ပုံတင်ပုံစံများနှင့်အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ရန်ပုံစံများ၊ သတင်းလွှာကြေးပေးသွင်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှုအမှာစာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လုပ်ဆောင်ရန်ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်အမြဲလိုအပ်သည်။ သင်၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကိုအချိန်မရွေးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ဝက်ဘ်နှင့် hosting: ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Occentus Networks မှ AB Internet Networks 1.2 SL စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဆာဗာများပေါ်တွင်စံအဆက်အသွယ်ပုံစံများဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာပေးပို့နိုင်ရန် SSL TLS v.2008 စာဝှက်စနစ်ပါရှိသည်။ ဝဘ်မှတစ်ဆင့်ကောက်ယူသောအချက်အလက်များ: စုဆောင်းထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များသည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် AB Internet Networks 2008 SL ပိုင်ဆိုင်သောဖိုင်များတွင်ထည့်သွင်းခြင်းခံရလိမ့်မည်။
တုံ့ပြန်ချက် Form ကို- ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသုံးပြုသူများသည်ဆိုဒ်၏ထုတ်ဝေမှုများအပေါ်မှတ်ချက်များကိုချန်ထားနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကပေးသောအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းသောကွတ်ကီးတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်လာရောက်လည်ပတ်မှုအသစ်တိုင်းတွင်၎င်းတို့အားပြန်လည်ထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲအီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နာမည်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အိုင်ပီလိပ်စာများကိုလည်းစုဆောင်းထားသည်။ ဒေတာများကို Occentus Networks ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြေ - သူတို့တောင်းဆိုတာကိုခွင့်မပြုဘူး။ ဝယ်ယူပုံစံကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းစတိုးများမှပေးသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်အသုံးပြုသူသည်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီတွင်သတ်မှတ်ထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခြေအနေများနှင့်အညီဝယ်သူပုံစံရှိသည်။ ဒေတာများကို Occentus ကွန်ယက်ဆာဗာများပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးဆိုင်၌ငွေရှင်းသည့်ကာလအတွင်းသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်တွင်သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်နှင့်သင့်အမိန့်များကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောအခြားသူများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်များ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည် -
သတင်းလွှာကြေးပေးသွင်းခြင်းပုံစံများ: AB Internet Networks 2008 SL သည်သင်၏အီးမေးလ်အချက်အလက်၊ အမည်နှင့်လက်ခံမှုကိုလက်ခံခြင်းကိုသိမ်းထားသော Sendgrid, Feedburner သို့မဟုတ် Mailchimp သတင်းလွှာပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ သင်လက်ခံရရှိသောတင်ပို့မှုတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသောသီးခြားလင့်ခ်တစ်ခုမှတဆင့်အချိန်မရွေးသတင်းလွှာမှစာရင်းသွင်းနိုင်သည် အီးမေးလ်: ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူမှာ Sendgrid ဖြစ်သည်။ လက်ငင်းစာတိုပေးပို့: AB Internet Networks 2008 SL သည် WhatsApp၊ Facebook Messenger သို့မဟုတ် Line ကဲ့သို့သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမပေးနိုင်ပါ။ ငွေပေးချေမှုကိုပံ့ပိုးပေးသူများ: ဝက်ဘ်မှတဆင့်သင်သည်လင့်ခ်များမှတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည် PayPal က o အစင်းAB Internet Networks 2008 SL မှပေးသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ငွေပေးချေရန်။ AB Internet Networks 2008 SL ၀ န်ထမ်းများကသင်ပြောသောတတိယပါတီများသို့ပေးသောဘဏ်အသေးစိတ် (ဥပမာ - ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်) ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မရရှိနိုင်ပါ။
ဝဗ်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများတွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ (ဥပမာ - ဗီဒီယို၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဆောင်းပါးများစသည်ဖြင့်) ပါဝင်နိုင်သည်။ အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များမှထည့်သွင်းထားသောအကြောင်းအရာသည် website ည့်သည်သည်အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်ပတ်ခဲ့သည့်နည်းတူပြုမူသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင့်အကြောင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်၊ cookies များကိုသုံးနိုင်သည်၊ embed third-party tracking နှင့် embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်၌အကောင့်တစ်ခုရှိပါကသို့မဟုတ်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါက embedded အကြောင်းအရာနှင့်သင်၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအချို့တွင်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသီးခြားအခြေအနေများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတောင်းခံခြင်းမပြုမီဖတ်ရန်နှင့်လက်ခံရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တရားဝင်မှု ဤအချက်အလက်များကိုဆောင်ရွက်ရန်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်တောင်းဆိုသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကွန်ရက်များရှိခြင်း: AB Internet Networks 2008 SL သည်အင်တာနက်ရှိအဓိကလူမှုကွန်ယက်အချို့တွင်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တရားဝင်မှု အထက်ဖော်ပြပါကွန်ယက်တစ်ခုစီတွင်ဒေတာနှင့်ဒေတာများကို AB Internet Networks 2008 SL မှဆောင်ရွက်ပေးမည့်ကုသမှုမှာလူမှုကွန်ယက်သည်ကော်ပိုရိတ်ပရိုဖိုင်းများအားခွင့်ပြုသည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဥပဒေအားတားမြစ်ထားသည့်အခါ၎င်း၏နောက်လိုက်များအားလူမှုကွန်ယက်က၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ တင်ဆက်မှုများ၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်တစ် ဦး ချင်းဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုအသိပေးနိုင်သည်။ ဒေတာထုတ်ယူမှု AB Internet Networks 2008 SL သည်အသုံးပြုသူများ၏သဘောတူညီမှုကိုတိတိကျကျမရရှိပါက၊ လူမှုကွန်ယက်များမှအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခွင့်အရေး: လူမှုကွန်ယက်များ၏သဘောသဘာဝအရနောက်လိုက်၏အချက်အလက်ကာကွယ်မှုအခွင့်အရေးကိုထိရောက်စွာလေ့ကျင့်ခြင်းက၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပြုပြင်ခြင်းကိုခံရသောအခါ၊ AB Internet Networks 2008 SL သည်အတိုင်းအတာအထိသင့်အားကူညီရန်နှင့်အကြံပေးလိမ့်မည် ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏။
အီးမေးလ်ပို့ရန်။ AB Internet Networks 2008 SL e-mail ဝန်ဆောင်မှုကို Sendgrid ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ပေးသည်။ လူမှုကွန်ယက်များ AB Internet Networks 2008 SL သည်အမေရိကန်လူမှုရေးကွန်ယက်များဖြစ်သော YouTube၊ Facebook၊ Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard ကိုအသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်၏ဆာဗာများနှင့်ပတ်သက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသဘောသဘာဝရှိသည်။ AB Internet Networks 2008 SL သည်၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်အသုံးပြုသူများ၊ စာရင်းပေးသွင်းသူများသို့မဟုတ်ရေကြောင်းသူများသည် AB AB Internet Networks 2008 SL သို့ပေးပို့သော (သို့) မျှဝေသောအချက်အလက်များကိုဆက်ဆံသည်။ ငွေပေးချေသူများ။ သငျသညျမှတဆင့်ပေးဆောင်နိုင်အောင် PayPal က o အစင်း, AB Internet Networks 2008 SL သည်၎င်းတို့အားတင်းကြပ်စွာလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတောင်းဆိုမှုကိုထုတ်ပေးရန်အတွက်ဤငွေပေးချေသူများအားဤအချက်အလက်များကိုပေးပို့လိမ့်မည်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးမူဝါဒအရကာကွယ်ထားသည်။ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုသက်ဝင်စေခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးများမူဝါဒကိုသင်နားလည်ပြီးလက်ခံသည်. သင်၏ဒေတာများကိုအမြဲတမ်းရယူပိုင်ခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ခြင်း၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူအဖြစ်သင်မှတ်ပုံတင်သည့် အချိန်မှစ၍ AB Internet Networks 2008 SL သည်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်အီးမေးလ်၊ IP လိပ်စာ၊ စာတိုက်လိပ်စာ၊ ID / CIF နှင့်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ AB Internet Networks 2008 SL သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲအချိန်မရွေးပြင်ဆင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့သော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တင်ဆက်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဤတရားဝင်အသိပေးချက်အဖြစ်အသိပေးသည်။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုမည်သူလုပ်ဆောင်သည်နှင့်မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပါ ၀ င်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကိုဤအခိုက်မှအပြည့်အဝနှင့်ကြိုတင်မှာကြားထားခြင်းမရှိဘဲလက်ခံသည် ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုသောအခါအသုံးပြုသူသည် AB Internet Networks 2008 SL သို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏ရုပ်ပုံ၊ အကျိုးစီးပွားနှင့်အခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်စေနိုင်သည့်သို့မဟုတ်ပေါ်တယ်ကိုပျက်စီးစေခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံပြုလုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဝဘ်၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှု။
ဆိုက်တွင်လက်ရှိဥပဒေပြor္ဌာန်းချက်သို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိဘဲယေဘူယျအခြေအနေများကိုရည်ညွှန်းသောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာပြင်ဆင်ထားသည့်စာသားများပါ ၀ င်ပြီးအသုံးပြုသူမှမည်သည့်အခါမျှတိကျသောကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည် AB Internet Networks 2008 SL ၏အမြင်များကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သောဆောင်းပါးများ၏ပါ ၀ င်မှုသည်တရား ၀ င်အကြံဥာဏ်များအတွက်အစားထိုးခြင်းကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူသည်သက်ဆိုင်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်ကို ဦး စွာမချဉ်းကပ်ဘဲဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အရေးယူခြင်းမပြုရ။
ဤအထွေထွေအခြေအနေများအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်စက်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုပေါ်တယ်သို့၎င်း၊ ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းများမှမည်သည့်အရာမှလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ မျိုးပွားခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပိုင်ရှင်မှတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့်သို့မဟုတ်ခွင့်ပြုထားသည့်ကိစ္စ မှလွဲ၍ အသုံးပြုသူများမှမည်သည့်သဘောသဘာဝကိုမဆိုနည်းလမ်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်ပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း။ အသုံးပြုသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုလုံး၊ အပြည့်အစုံမပါရှိသည့်စာသား၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်တင်ဆက်ခြင်းအပါအ ၀ င်၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ စပိန်နိုင်ငံပါ ၀ င်သောနိုင်ငံတကာစာချုပ်များနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ထားသောအခြားတရားဝင်အခွင့်အရေးများနှင့်စပိန်၏အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့်ဥပဒေများ။ အသုံးပြုသူ (သို့) တတိယပုဂ္ဂိုလ်က ၄ င်းတို့၏တရား ၀ င်အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုဆိုက်တွင်အချို့သောအကြောင်းအရာများတင်ခြင်းကြောင့်ချိုးဖောက်သည်ဟုယူဆပါက၎င်းတို့သည် AB Internet Networks 2008 SL အားဤအခြေအနေအားအကြောင်းကြားရမည်။
ထို site ၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုအခြေအနေများကိုစပိန်ဥပဒေအရ၎င်းအစွန်းရောက်များအားလုံးတွင်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒီတရားဝင်အသိပေးစာ၏အရေးအသားနှင့်အနက်ကိုဘာသာစကားသည်စပိန်ဘာသာဖြစ်သည်။ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တင်သွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် AB Internet Networks 2008 SL သည်ဤစာသားသို့မဟုတ် AB Internet Networks 2008 SL ၏လုပ်ဆောင်မှုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Consumer Arbitration System သို့တင်ပြနိုင်သည်။ အသင်း ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၊ အသုံးပြုသူသည်သင့်လျော်သော bar အသင်း၏သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့သို့သွားရမည်။ စပိန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစားသုံးသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအဆင့်အတန်းရှိသူများနှင့်ဥရောပသမဂ္ဂတွင်နေထိုင်သောအသုံးပြုသူများသည် AB Internet Networks 2008 SL သို့အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemနာရှိခဲ့လျှင်တရားရုံးပြင်ပသဘောတူညီချက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားပါ။ သွားနိုင်ပါတယ် အွန်လိုင်းအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းမှုပလက်ဖောင်း, ဥရောပသမဂ္ဂအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်အောက်မှာဥရောပကော်မရှင်ကတီထွင်ခဲ့သည် Regulation (EU) 524/2013။ အသုံးပြုသူသည်စားသုံးသူ (သို့) အသုံးပြုသူမဟုတ်ပါကအခြားလိုအပ်သောစည်းမျဉ်းများမရှိပါကပါတီများသည်မက်ဒရစ်မြို့တော်၏တရားရုံးများနှင့်ခုံရုံးများသို့တင်ပြရန်သဘောတူသည်။ ဤစာချုပ်သည်နိဂုံးချုပ်ထားသည်။ သူတို့ကိုကိုက်ညီစေခြင်းငှါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။
အသုံးပြုသူ၏အခြေအနေကိုဆောင်ရွက်သူ၊ ယခုအချိန်မှစ၍ ကြိုတင်မှာကြားထားချက်မရှိဘဲလက်ခံခြင်း၊ ဤတရားဝင်အသိပေးချက်အပြင်၊ သင့်လျော်သောနေရာ၌၎င်းနှင့်အချို့သောဆက်ဆံရေးများ၌၎င်းကိုဖြည့်စွက်သည့်အထူးအခြေအနေများအားအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပေါ်တယ်၏ contents ။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသည် AB Internet Networks 2008 SL နှင့်စီးပွားဖြစ်ဆက်နွယ်မှု၏အစကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအသုံးပြုသူကိုအကြောင်းကြားပြီးလက်ခံသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူသည်လက်ရှိဥပဒေ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားတရားမဝင်သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုခြင်း (သို့) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုပျက်ပြားစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်တားဆီးနိုင်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တားမြစ်သည် -
ဝက်ဘ်ဆိုက်၏စာမျက်နှာများသည်အခြားကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်တတိယပါတီများ၊ ထုတ်လုပ်သူများသို့မဟုတ်ပေးသွင်းသူများပိုင်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများကိုလင့်ခ်ပေးသည်။ လင့်ခ်များ၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်မှာအသုံးပြုသူများအားအဆိုပါလင့်များကိုရယူခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုသိရှိခြင်းတို့အားထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် AB Internet Networks 2008 SL သည်လင့်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးပြုသူမှရရှိသောရလဒ်အတွက်မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုတာ ၀ န်မရှိပါ။ သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှမည်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာချိတ်ဆက်စက်ကိုမဆိုတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောအသုံးပြုသူသည် AB Internet Networks 2008 SL ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။ AB Internet Networks 2008 SL နှင့် link တည်ရှိရာ site ၏ပိုင်ရှင်အကြားဆက်ဆံရေးတည်ရှိမှု၊ AB Internet Networks 2008 SL မှ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏ဆက်သွယ်မှုတည်ရှိမှုကို link တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကမည်သည့်ကိစ္စတွင်မျှမဆိုလိုပါ။
လုပ်ဆောင်ချက် မည့် သို့မဟုတ်အလားတူ AdWords မှပရိသတ်များကကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယခင်ကဝင်ရောက်ဖူးသူများနှင့်၎င်းတို့အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှတ်သားစရာကောင်းသော cookie ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည် (၎င်းသည် Google Adwords, Criteo သို့မဟုတ် remarketing ကိုကမ်းလှမ်းသောအခြားဝန်ဆောင်မှုများမှ) ဖြစ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဝီရိယရှိရှိအသုံးပြုရန်သဘောတူသည်။ ဥပဒေ၊ အကောက်ခွန်နှင့်ဤတရားဝင်အသိပေးချက်ကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် AB Internet Networks 2008 SL ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သောသတင်းအချက်အလက်များကို AB Internet Networks 2008 SL ၏ကြိုတင်၊ စာဖြင့်ရေးသား။ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင်၊ ၎င်းသည်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစီးပွားဖြစ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းအားတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုခွင့်။ ဤဆိုဒ်သည်ဤဆိုဒ်သို့ပို့ေပးသည့်မှတ်ချက်များနှင့်ဆက်စပ်ေသာဒေတာဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းသည်။ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ခြင်းများအတွက်သင်၏အခွင့်အရေးကို currentblog (dot) com သို့လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤဆိုဒ်၊ ဆက်စပ်ဒိုမိန်းများနှင့်အကြောင်းအရာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် AB Internet Networks 2008 SL ဖြစ်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းပြင်ပရှိအခြားသူများစီမံခန့်ခွဲသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဦး တည်သွားသော hyperlink များပါ ၀ င်သည်။ AB Internet Networks 2008 SL သည် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်စုဆောင်းထားသောအကြောင်းအရာများအတွက်အာမခံချက်မရှိပါ၊ ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုခြင်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ပါ ၀ င်မှုအားလုံးသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်မည်သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်မဆို AB Internet Networks 2008 SL ၏ ကြိုတင်၍ ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မရှိပါကပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း။ AB Internet Networks 2008 SL ၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ၊ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မျှမတူအောင်ပြုလုပ်ရန်တင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် AB Internet Networks XNUMX SL သည်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏အပြောင်းအလဲ (သို့) ခြယ်လှယ်မှုများမှတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်၊
အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုဤဥပဒေရေးရာအခြေအနေများနှင့်ပေါ်တယ်နှင့်ပတ်သက်။ မှတ်ချက်နှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါက, (at) actualityblog (dot) com ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီသည်ဤ site ရှိမတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်စာမျက်နှာများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စုဆောင်းသိုလှောင်ထားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒအားလက်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုသင်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။